Sudan - အများပိုင်သတင်း။ အွန်လိုင်းစီးပွားရေး၊ လက်ကားနှင့် B2B Marketplace သတင်း
Coronavirus - ယူနီဆက်သည်ပိတ်ခြင်းကျောင်းများကိုဆန့်ကျင်သည်
ကုလသမဂ္ဂကလေးများရန်ပုံငွေအဖွဲ့ (UNICEF) ကအတန်းမတက်နိုင်သည့်ကလေးအရေအတွက်သည်ထပ်မံမြင့်တက်လာကြောင်းကြေငြာခဲ့ပြီးကျောင်းပိတ်ခြင်းသည် Coronavirus ကူးစက်ရောဂါကိုမှားယွင်းစွာတုန့်ပြန်သည်ဟုသတိပေးသည် ယူနီဆက်ဖ်ကပြောကြားသည်မှာကမ္ဘာတဝှမ်းရှိကျောင်းသား ၅ ယောက်လျှင် ၁ ဦး နီးပါးရှိသည် ဒီလရဲ့အစမှာကျောင်းမတက်နိုင်ခဲ့ကြဘူး။
နိုဝင်ဘာလ 16, 2020 နိုဝင်ဘာလ 16, 2020 Christina Kitova	မှတ်ချက် Leave
နိုဝင်ဘာလ 2, 2020 နိုဝင်ဘာလ 1, 2020 Samuel Gush	မှတ်ချက် Leave
အစ္စရေး ၀ န်ကြီးချုပ် Benjamin Netanyahu သတိပေးလိုက်သည် အစ္စရေးစစ်တပ်ရာထူးများကိုတိုက်ခိုက်ခြင်းအားဟစ်ဇ်ဘိုလာအကြမ်းဖက်အဖွဲ့ဖြစ်သည်။ ဤသည်မှာအစ္စရေးမြောက်ပိုင်းသို့ IDF သေစေလောက်သည့် Arrow လေ့ကျင့်ခန်းပြုလုပ်နေစဉ်ဖြစ်သည်။ နှစ်စဉ်လေ့ကျင့်ခန်းသည်နိုင်ငံအားဆက်လက်ခြိမ်းခြောက်နေသောအကြမ်းဖက်အုပ်စုများကိုတိုက်ခိုက်ခြင်းကိုတုပသည်။
အောက်တိုဘာလ 24, 2020 အောက်တိုဘာလ 24, 2020 David Wexelman	မှတ်ချက် Leave
တောင်ဆူဒန်ကိုမြောက်ဆူဒန်ဟုလည်းခေါ်ပြီးအရှေ့မြောက်အာဖရိကရှိတိုင်းပြည်ကိုဆူဒန်သမ္မတနိုင်ငံဟုတရားဝင်ခေါ်တွင်သည်။ မြောက်ဘက်တွင်အီဂျစ်၊ အနောက်မြောက်ဘက်တွင်လစ်ဗျား၊ အနောက်ဘက်တွင်ချဒ်နှင့်အနောက်တောင်ဘက်တွင်ဗဟိုအာဖရိကသမ္မတနိုင်ငံတို့နှင့်နယ်နိမိတ်ချင်းထိစပ်နေသည်။ တောင်ဘက်တွင်တောင်ဆူဒန်၊ အရှေ့တောင်ဘက်တွင်အီသီယိုးပီးယားနှင့်အရှေ့မြောက်ဘက်တွင်ပင်လယ်နီ။ လူ ဦး ရေ ၄၃ သန်းရှိသည့်လူ ဦး ရေသည်အာဖရိကဒေသနှင့်တတိယအကြီးဆုံးနိုင်ငံဖြစ်သည်။
အောက်တိုဘာလ 24, 2020 အောက်တိုဘာလ 24, 2020 ဂျော့ခ်ျ Mtimba	မှတ်ချက် Leave
အစ္စရေးနှင့်ဆူဒန်ဆက်ဆံရေးပုံမှန်ဖြစ်ရန်သဘောတူခဲ့သည် အမေရိကန်စေ့စပ်ဖြန်ဖြေမှတဆင့်သူတို့ကိုအကြား။ ဆူဒန်သည် ၂ လအတွင်းအစ္စရေးနှင့်ဆက်ဆံရေးထူထောင်ရန်တတိယမြောက်အာရပ်နိုင်ငံဖြစ်သည်။ ပါလက်စတိုင်းများသည်သဘောတူညီချက်ကိုရှုတ်ချ။ ၎င်းသည်“ ပါလက်စတိုင်းလူမျိုးများ၏နောက်ကျောတွင်ထိုးနှက်ချက်အသစ်” နှင့်“ နိုင်ငံရေးအရအပြစ်” ဟုယူမှတ်သည်။
ဆူဒန်နိုင်ငံအရှေ့ပိုင်းကတ်စလာတွင်ဖြစ်ပွားသောတိုက်ပွဲများကြောင့်လူရှစ် ဦး သေဆုံး
အယ်ဒီတာရဲ့ Pick အောက်တိုဘာလ 17, 2020 အောက်တိုဘာလ 16, 2020 ဗင်းဆင့်ဖာဒီနန်	မှတ်ချက် Leave
အနည်းဆုံးလူရှစ် ဦး သေဆုံးခဲ့သည် ဆူဒန်နိုင်ငံအရှေ့ပိုင်းကက်စလာတွင်ဆန္ဒပြပြီးနောက်ဒဏ်ရာရသူရမှတ်များသည်တိုက်ပွဲများအတွင်းဆုတ်ယုတ်ကျဆင်းသွားသည်။ ဆူဒန် ၀ န်ကြီးချုပ် Abdalla Hamdok မှပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး Saleh Ammar အား Bani Amer အနွယ်မှထုတ်ပယ်ရန်ကြိုးပမ်းမှုကြောင့်ဆန္ဒပြမှုများမှာနှေးကွေးခဲ့သည်။
စက်တင်ဘာလ 11, 2020 စက်တင်ဘာလ 11, 2020 Juliet Norah	မှတ်ချက် Leave
ဆူဒန်နိုင်ငံသည်စီးပွားရေးအရေးပေါ်အခြေအနေကိုကြေငြာခဲ့သည် ယင်း၏ငွေကြေးတစ် ဦး ချွန်ထက်သောကျဆုံးခြင်းပြီးနောက်။ အသွင်ကူးပြောင်းရေးအစိုးရကိုဆန့်ကျင်သူများ၏ကြိုးကိုင်ခြယ်လှယ်မှုကြောင့်ပေါင်တန်ဖိုးကျဆင်းသွားသည်ဟုစွပ်စွဲချက်များရှိသည်။ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွင်ဆူဒန်ပေါင်သည်အပြိုင်ဈေးကွက်တွင်အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂၄၀ နှုန်းဖြင့်ကုန်သွယ်နေသည်ဟုသတင်းများရရှိခဲ့သည်။
ဆူဒန်သည် Darfur မှပConိပက္ခများကိုအဆုံးသတ်ရန်ငြိမ်းချမ်းရေးသဘောတူညီချက်ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်
စက်တင်ဘာလ 1, 2020 စက်တင်ဘာလ 1, 2020 Doris Mkwaya	မှတ်ချက် Leave
တရားဝင်သူပုန်လှုပ်ရှားမှုခေါင်းဆောင်များနှင့်ဆူဒန်အစိုးရကိုယ်စားလှယ်များ တောင်ဆူဒန်၊ ဂျူဘားတွင်သမိုင်းဝင်ငြိမ်းချမ်းရေးသဘောတူညီမှုကိုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည် ဒါဖောဒေသရှိနာတာရှည်ပconflictိပက္ခကိုအဆုံးသတ်စေသည်။ အဆိုပါသဘောတူညီချက်သည်လက်နက်ကိုင်လှုပ်ရှားမှုများကိုဖျက်သိမ်းရန်နှင့်၎င်းတို့၏အဖွဲ့ဝင်များကိုပုံမှန်စစ်တပ်ထဲ ၀ င်ရန်ဖြစ်သည်။
ဆူဒန် - အစိုးရနှင့်သူပုန်များငြိမ်းချမ်းရေးသဘောတူညီချက်လက်မှတ်ရေးထိုး
သြဂုတ်လ 31, 2020 သြဂုတ်လ 31, 2020 ဗင်းဆင့်ဖာဒီနန်	မှတ်ချက် Leave
ဆူဒန်အစိုးရနှင့် Darfur ၏အဓိကသူပုန်မဟာမိတ်အဖွဲ့ဖြစ်သောဆူဒန်တော်လှန်ရေးတပ် ဦး (SRF)၊ အင်္ဂါနေ့ကငြိမ်းချမ်းရေးသဘောတူညီချက်လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည် ၁၇ နှစ်ကြာပconflictိပက္ခကိုအဆုံးသတ်ရန်။ တောင်ဆူဒန်၏မြို့တော်ဂျူဘားတွင်ပြုလုပ်သောအခမ်းအနားတွင်နှစ်ဖက်သဘောတူညီချက်လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်။
နေတန်ယာဟုအပေးအယူ - ညှိနှိုင်းမှုအစိုးရအချိန်တိုးချဲ့
သြဂုတ်လ 24, 2020 သြဂုတ်လ 24, 2020 David Wexelman	မှတ်ချက် Leave
ဘင်ဂျမင်နေတန်ယာဟုသည်သူနှင့်လီကွတ်တို့၏စတုတ္ထရွေးကောက်ပွဲကိုရှောင်လွှဲရန်သဘောတူလိုက်သည် နောက်ဆုံးသတ်မှတ်ရက်ကိုနောက်ဆုတ်လိုက်ခြင်းသည်အုပ်ချုပ်ရေးပါတီနှစ်ခုသည်တရားရေးဆိုင်ရာခန့်အပ်မှုများနှင့်အနောက်ဘက်ကမ်းခြေအခြေချနေထိုင်မှုများအပါအ ၀ င်သော့ချက်ကျသောကိစ္စရပ်များတွင်ဘတ်ဂျက်အကျပ်အတည်းကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ၀ န်ကြီးချုပ်နေတန်ယာဟုကရုပ်မြင်သံကြားမှထုတ်လွှင့်ခဲ့ပြီးသူသည်တိုင်းပြည်ကိုစတုတ္ထမြောက်ရွေးကောက်ပွဲသို့ဆွဲဆောင်မည်မဟုတ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။
Pompeo သည်ဂျေရုဆလင်သို့ရောက်ရှိခြင်း၊ ME ခရီးစဉ်သို့ပထမအကြိမ်ရောက်ရှိသည်
သြဂုတ်လ 24, 2020 သြဂုတ်လ 24, 2020 Doris Mkwaya	မှတ်ချက် Leave
ပြည်နယ်၏အမေရိကန်အတွင်းရေးမှူး Mike Pompeo သည်ဂျေရုဆလင်သို့ရောက်ရှိခဲ့သည် တနင်္လာနေ့ကအစ္စရေးအရာရှိများနှင့်တွေ့ဆုံရန် ခရီးစဉ်၏ရည်ရွယ်ချက်မှာသမ္မတ Donald Trump ၏အရှေ့အလယ်ပိုင်းငြိမ်းချမ်းရေးအစီအစဉ်နှင့်အစ္စရေးတို့၏အာရပ်နိုင်ငံများနှင့်နီးကပ်မှုရှိစေရန်ဖြစ်သည်။ အစ္စရေး ၀ န်ကြီးချုပ် Benjamin Netanyahu ထို့နောက် ၀ န်ကြီးချုပ်ရုံးတွင် Pompeo နှင့်တွေ့ဆုံခဲ့သည်။
Pompeo နှင့် Kushner အရှေ့အလယ်ပိုင်းနိုင်ငံများသို့ခရီးသွားခြင်း
သြဂုတ်လ 23, 2020 သြဂုတ်လ 23, 2020 ဘင်နီဒစ် Kasigara	မှတ်ချက် Leave
နိုင်ငံခြားရေး ၀ န်ကြီးဌာန ၀ န်ကြီး Mike Pompeo နှင့် Jared Kushner၊ ချွေးမနှင့်သမ္မတ Donald Trump ၏အကြံပေး၊ အရှေ့အလယ်ပိုင်းကိုခရီးသွားနေကြတယ်။ အမေရိကန်အရာရှိနှစ် ဦး ၏ခရီးစဉ်သည်အများအားဖြင့်ဒေသတွင်းရှိနိုင်ငံများအားအစ္စရေးနှင့်ဆက်ဆံရေးထူထောင်ရန်အားပေးရန်ဖြစ်သည်။ AFP ကသံတမန်သုံး ဦး ကို ကိုးကား၍ Pompeo နှင့် Kushner သီးခြားစီသွားမည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။
အစ္စရေးနှင့်ဆွေးနွေးရန်အတည်ပြုသောဆူဒန်နိုင်ငံမှ FM ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ
သြဂုတ်လ 19, 2020 သြဂုတ်လ 19, 2020 ဂျော့ခ်ျ Mtimba	မှတ်ချက် Leave
သူ၏တိုင်းပြည်နှင့်အစ္စရေးတို့အကြား“ အဆက်အသွယ်များ” အကြောင်းကိုထုတ်ပြန်ကြေငြာပြီးနောက် ဆူဒန်နိုင်ငံခြားရေး ၀ န်ကြီးဌာနက၎င်း၏ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူအားသက်သာခွင့်ပေးခဲ့သည်မိမိအရာမှ, Haydar Sadig ။ ၀ န်ကြီးဌာနသည် Sadig ၏ထုတ်ပြန်ချက်များကိုအံ့အားသင့်ကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့ပြီးအစ္စရေးနှင့်ဆက်ဆံရေးထူထောင်ရန်ဆွေးနွေးခြင်းမရှိကြောင်းအတည်ပြုခဲ့သည်။
အစ္စရေး - အခြားပင်လယ်ကွေ့နိုင်ငံများ၊ ဆူဒန်၊ ယူအေအီးနောက်သို့လိုက်နိုင်
သြဂုတ်လ 17, 2020 သြဂုတ်လ 17, 2020 ဘင်နီဒစ် Kasigara	မှတ်ချက် Leave
အစ္စရေးထောက်လှမ်းရေးဝန်ကြီး Eli Cohen တနင်္ဂနွေနေ့ကအစ္စရေးစစ်တပ်ရေဒီယိုနှင့်တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်းတွင်ဘာရိန်း၊ အိုမန်၊ ဆူဒန်မကြာမီလိုက်နာနိုင်ဘူး မကြာသေးမီကယူအေအီး - အစ္စရေးသံတမန်သဘောတူညီချက်။ ဘာရိန်းနှင့်အိုမန်တို့သည်ယူအေအီး - အစ္စရေးသံတမန်ရေးသဘောတူစာချုပ်ကိုကြိုဆိုသော်လည်းအစ္စရေးနှင့်သူတို့၏ဆက်ဆံရေးအပေါ်မှတ်ချက်မပေးခဲ့ပါ။
သြဂုတ်လ 5, 2020 သြဂုတ်လ 5, 2020 ဘင်နီဒစ် Kasigara	မှတ်ချက် Leave
Grand Ethiopian Renaissance ဆည်တည်ဆောက်ခြင်း အပြာရောင်နိုင်းလ်တွင်ဖြစ်ပွားနေသော“ ရေစစ်ပွဲ” သို့ ဦး တည်သွားနိုင်သည်ဟုထင်ကြေးများမြင့်တက်လာသည်။ ဆည်သည်အီဂျစ်၊ အီသီယိုးပီးယားနှင့်ဆူဒန်အကြားတင်းမာမှု၏ရင်းမြစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ သို့သော်ထိုစစ်သုံးနိုင်ငံသည်မည်သည့်နိုင်ငံသုံးနိုင်ငံအကြားအလွန်အမင်းမဖြစ်နိုင်ပါ။
ဇူလိုင်လ 28, 2020 ဇူလိုင်လ 28, 2020 Juliet Norah	မှတ်ချက် Leave
ဆူဒန်အစိုးရအနေဖြင့်လည်းစစ်တပ်ထပ်မံပို့ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည် ဒါဖော အကြမ်းဖက်မှုတစ်ခုမြင့်တက်အောက်ပါဒေသ။ ဝန်ကြီးချုပ်, Abdalla Hamdok, ဒီလှုပ်ရှားမှုကနေထိုင်သူများကိုအကာအကွယ်ပေးရန်ရည်ရွယ်သည်ဟုပြောကြားခဲ့သည် အထူးသဖြင့်မှည့်သောစိုက်ပျိုးရေးရာသီတွင်ဖြစ်သည်။ စစ်တပ်နှင့်ရဲများပါ ၀ င်မည်ဖြစ်သည်။
Darfur တွင်တိုက်ခိုက်သူများသည်အသက် ၂၀ သေဆုံး
ဇူလိုင်လ 26, 2020 ဇူလိုင်လ 26, 2020 Juliet Norah	မှတ်ချက် Leave
စစ်ဒဏ်ကြောင့်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အနည်းဆုံးလူ ၂၀ ခန့်သေဆုံးခဲ့သည် ဒါဖော ဆူဒန်နိုင်ငံ။ ကလေးများပါ ၀ င်သည့်သားကောင်များသည်နှစ်ပေါင်းများစွာအတွင်းပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ်ထိုဒေသရှိသူတို့၏မြေယာများသို့သွားရောက်လည်ပတ်ခဲ့သည်ဟုဆိုကြသည်။ Aboudos တွင်ဖြစ်ပွားခဲ့သောတိုက်ခိုက်မှုသည် အခြား 20 လူများဒဏ်ရာရကျန်ရစ်ခဲ့သည်။
ဆူဒန်နိုင်ငံ၏ Hamdok သည်အရပ်သားအုပ်ချုပ်ရေးမှူး ၁၈ ဦး ခန့်အပ်ခဲ့သည်
ဇူလိုင်လ 23, 2020 ဇူလိုင်လ 23, 2020 ဗင်းဆင့်ဖာဒီနန်	မှတ်ချက် Leave
အသွင်ကူးပြောင်းရေးဆိုင်ရာဆူဒန်အစိုးရကိုကြေငြာခဲ့သည် အများဆုံးစစ်တပ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများ၏အစားထိုး အရပ်သားများနှင့်အတူဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွင်ဒီမိုကရေစီ၊ အရပ်သား ဦး ဆောင်သည့်ဖွဲ့စည်းပုံသို့ ဦး တည်နေခြင်းဖြစ်သည်။ ဆူဒန်ဝန်ကြီးချုပ် Abdalla Hamdok သည်မြို့တော် Khartoum မှပြောင်းလဲမှုကိုကြေငြာခဲ့သည်။
ဆူဒန်နိုင်ငံ၏ Bashir သည် ၁၉၈၉ အာဏာသိမ်းမှုအတွက်သေဒဏ်ချမှတ်ခြင်းခံရသည်
ဇူလိုင်လ 21, 2020 ဇူလိုင်လ 21, 2020 ဂျော့ခ်ျ Mtimba	မှတ်ချက် Leave
ဆူဒန်သမ္မတဟောင်းအိုမာအယ်လ်ဘာရှား ထို့အပြင် Khartoum ရှိတရားသူကြီးသုံး ဦး ၏အထူးတရားရုံးတွင် ၁၉၈၉ ခုနှစ်တွင်ရွေးကောက်တင်မြှောက်ထားသည့်အစိုးရအားဖြုတ်ချသည်ဟူသောစွပ်စွဲချက်ဖြင့်အခြား ၁၆ ဦး သည်ထင်ရှားခဲ့သည်။
အီသီယိုးပီးယားသည် GERD ကိုဖြည့်သည်။ ဆည်ကြီးပြProbleနာကိုဖြစ်စေသည်
ဇူလိုင်လ 16, 2020 ဇူလိုင်လ 16, 2020 Joyce Davis က	မှတ်ချက် Leave
အီသီယိုးပီးယားသည်အီဂျစ်နှင့်ဆူဒန်တို့၏ရေလှောင်ကန်ကိုတမင်ဖြည့်ထားသည်ဟူသောစွပ်စွဲချက်ကိုအငြင်းပွားခဲ့သည် Grand Ethiopian Renaissance ဆည် (GERD) မြင့်တက်သောရေအဆင့်ကိုခေါ် ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်၏သဘာဝအစိတ်အပိုင်းတစ်ခု။ အီဂျစ်သည်အီသီယိုးပီးယားအစိုးရအားချက်ချင်းရှင်းလင်းပေးရန်တောင်းဆိုခဲ့သည်။
ဇူလိုင်လ 14, 2020 ဇူလိုင်လ 14, 2020 ဂျော့ခ်ျ Mtimba	မှတ်ချက် Leave
ဆူဒန်အစိုးရ၏တရားရေး ၀ န်ကြီး Nasruddin Abdul Bari ထုတ်ပြန်ကြေညာ အပြောင်းအလဲများကိုတင်းကျပ်စေပြီပြည်နယ်ရုပ်မြင်သံကြားအပေါ်မိန့်ခွန်း၌တည်၏ အစ္စလာမ့်ရှရီယာဥပဒေများ ဆူဒန်၏တရားရေးစနစ်ကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများပြုလုပ်နေသည်။
ဇူလိုင်လ 1, 2020 ဇြန္လ 30, 2020 os နုတ် Denhere	မှတ်ချက် Leave
Corona ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုပြီးဆုံးပြီးနောက်အာဖရိကသည်ပေါ်ထွန်းလာမည်လော။ ခက်ခဲသောအချိန်များတွင်ပြည်သူလူထုအနေဖြင့်ထိခိုက်လွယ်ခြင်းမရှိစေရန်အာဖရိကသည်အသုံးမပြုရသေးသောစည်းစိမ်ဥစ္စာအရင်းအမြစ်များကိုအပြည့်အဝအသုံးချပြီးအကျင့်ပျက်ခြစားမှုကိုတိုက်ဖျက်ရန်လိုအပ်သည်။ တိုက်ကြီးအောက်ခြေလူတန်းစားစွမ်းရည်မြှင့်တင်ရေးကိုအာရုံစိုက်ရန်လိုအပ်သည်။ အဓိကအာရုံစိုက်မှုမှာအောက်ဖော်ပြပါကဏ္sectorsများဖြစ်သည့်အစားအစာထုတ်လုပ်မှု (စိုက်ပျိုးရေးတော်လှန်ရေး)၊ ရေနှင့်သန့်ရှင်းရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ လျှပ်စစ်စွမ်းအင်ရင်းမြစ်များ၊ စက်မှုထွန်းကားမှုတော်လှန်ရေး၊
ဆူဒန်သည်လစ်ဗျားသို့သွားသော“ ကြေးစား” များအားဖမ်းဆီးခဲ့သည်
ဇြန္လ 29, 2020 ဇြန္လ 29, 2020 ဘင်နီဒစ် Kasigara	မှတ်ချက် Leave
ဆူဒန်အာဏာပိုင်များကသူတို့ ၁၂၂ ယောက်ကိုဖမ်းဆီးခဲ့သည်ဟုကြေငြာခဲ့သည် တရား ၀ င် SUNA သတင်းအေဂျင်စီ၏အဆိုအရလစ်ဗျားသို့၎င်းတို့၏“ ကြေးစားအဖြစ်လုပ်ကိုင်ရန်” ၎င်းတို့၏နည်းလမ်းကိုပြောကြားခဲ့သည်။ လစ်ဗျားအစိုးရမှအမျိုးသားသဘောတူညီချက် (GNA) သည်ဆူဒန်ကျွန်များကိုစစ်တပ်အားထောက်ပံ့သည်ဟုစွပ်စွဲခဲ့သည် Khalifa Haftar.
ဇြန္လ 27, 2020 ဇြန္လ 27, 2020 Doris Mkwaya	မှတ်ချက် Leave
ဆူဒန်နှင့်အီဂျစ်ကြေငြာခဲ့သည် အာဖရိကအသေးစားထိပ်သီးအစည်းအဝေးအတွင်းအီသီယိုးပီးယားက၎င်းသည်သုံးပွင့်ဆိုင်သဘောတူညီချက်မရရှိမှီနိုင်းလ်မြစ်ပေါ်တွင်တည်ဆောက်နေသည့် Renaissance ဆည်ကိုဖြည့်ဆိုင်းရန်သဘောတူခဲ့သည်။ ဤရည်ရွယ်ချက်အတွက်ကော်မတီတစ်ခုဖွဲ့စည်းရန်လည်းသဘောတူညီခဲ့ကြသည်။ ဆည်နှင့် ပတ်သက်၍ စေ့စပ်ညှိနှိုင်းမှုများကိုနှစ်ပေါင်းများစွာကြာရှည်စွာညှင်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းဟုဖော်ပြထားသည်။
ဆူဒန်ပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးအတွက်ဒေါ်လာ ၁ ဒ1.8မ ၈ ဘီလီယံကုန်ကျမည်
ဇြန္လ 26, 2020 ဇြန္လ 26, 2020 Joyce Davis က	မှတ်ချက် Leave
ဆူဒန်သည်ဒေါ်လာ ၂ ဘီလီယံနီးပါးအကူအညီပေးရန်ကတိပေးခဲ့သည်ဂျာမနီမှအိမ်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကျင်းပသည့်နိုင်ငံတကာညီလာခံတစ်ခုတွင်ဂျာမနီမှယူရိုသန်း ၁၅၀ အပါအ ၀ င်ဖြစ်သည်။ အဆိုပါညီလာခံသည်ကြွေးမြီဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးများနှင့်ပြင်းထန်သောစီးပွားရေးအကျပ်အတည်းများကြုံတွေ့နေရသောတိုင်းပြည်တွင်အကူးအပြောင်းဖြစ်စဉ်ကိုထောက်ပံ့ရန်ရည်ရွယ်ခဲ့သည်။
ဇြန္လ 20, 2020 ဇြန္လ 20, 2020 Joyce Davis က	မှတ်ချက် Leave
အီဂျစ်သည်ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီသို့တောင်းဆိုချက်ကိုတင်သွင်းခဲ့သည် အတွက်ဝင်ရောက်စွက်ဖက်ရန် Grand Ethiopian Renaissance ဆည် သောကြာနေ့တွင်အငြင်းပွားမှု။ အီဂျစ်၊ ဆူဒန်နှင့်အီသီယိုးပီးယားတို့အကြားညှိနှိုင်းမှုပျက်ပြားသွားသည်နှင့်အမျှဖြစ်ပေါ်လာသည်။ အထူးသဖြင့်ရေဝေငှခြင်းယန္တရားနှင့် ပတ်သက်၍ သုံးနိုင်ငံအကြားသဘောတူညီမှုမရရှိခဲ့ပါ။
“ ကျိုင်းကောင် -19” - Coronavirus တိုက်ခိုက်မှုကြားတွင်အာဖရိကသည်ဒုတိယလှိုင်းလုံးအတွက်အသင့်ဖြစ်နေပြီ
ဧပြီလ 25, 2020 ဧပြီလ 25, 2020 ဂျော့ခ်ျ Mtimba	မှတ်ချက် Leave
ကျိုင်းကောင်၏ဒုတိယလှိုင်းသည်အရှေ့အာဖရိကတွင်အကြီးအကျယ်ပျက်စီးစေနိုင်သည်coronavirus မဖြစ်ပွားခင်လေးပတ်အကြာတွင်အန္တရာယ်ရှိသောပိုးမွှားအုပ်စုတစ်စုသည်ဒေသအတွင်းကျူးကျော်ဝင်ရောက်ခဲ့သည်။ "COVID-19 မှထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သူများသည်ကျိုင်းကောင်များနှင့်ရင်ဆိုင်ရဖွယ်ရှိသည်" ဟုအာဖရိကဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်ဥက္ကPresident္ဌနှင့်နိုင်ဂျီးရီးယားစိုက်ပျိုးရေးဝန်ကြီးဟောင်း Akinwumi Adesina ကပြောကြားခဲ့သည်။
Coronavirus - အာဖရိကဟာ“ နိုးထ” ပြီး“ အဆိုးဆုံးအတွက်ပြင်ဆင်” ရမယ်
မတ်လ 21, 2020 မတ်လ 21, 2020 ဗင်းဆင့်ဖာဒီနန်	1 မှတ်ချက်
ယနေ့အရေအတွက်ကိုမြင်တော်မူ၏ အာဖရိကတိုက်ရှိ coronavirus သစ်ကြောင့်ကူးစက်ရောဂါသည်တိုက်ကြီးတစ်လွှားရှိနိုင်ငံပေါင်း ၄၀ တွင် ၁,၀၀၀ ကျော်လွန်သွားသည်covid-30 ကူးစက်ရောဂါနှင့်ပတ်သက်သည့်နောက်ဆုံးစာရင်းဇယားများအရသေဆုံးသူ ၃၀ ရှိကြောင်းမှတ်တမ်းများဖြင့်ဖော်ပြထားသည်။ စုစုပေါင်းရောဂါဖြစ်ပွားမှု ၁,၁၀၇ ခုကိုကူးစက်ရောဂါစတင်ကတည်းကမှတ်တမ်းတင်ထားသည်။ တိုက်ကြီးတွင်ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ်အပျက်ကိုအီဂျစ်နိုင်ငံ၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၄ ရက်တွင်အစီရင်ခံခဲ့သည်။
အီဂျစ်နိုင်ငံသည်ဆူဒန်အားဆူဒန်အားအငြင်းပွားမှုတွင်တရား ၀ င်ဖျန်ဖြေသူအဖြစ်သတ်မှတ်သည်
မတ်လ 15, 2020 မတ်လ 15, 2020 ဂျော့ခ်ျ Mtimba	မှတ်ချက် Leave
ဆူဒန်နိုင်ငံ၏ဒုတိယဥက္ကChairman္ဌ၏ဒုဒုတိယဥက္ကChairman္ဌ၊ ဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီးမိုဟာမဒ်ဟာ့ဒ်နာဒါဂလို၊ “ ဟာမဒီတီ” သည်သတင်းထောက်များကိုဆူဒန်ကဆူဒန်သည်ရေနံချောင်းဆည်စီမံကိန်း၏အစိတ်အပိုင်း၊ Egurt နှင့်Ethіorіаအကြားစေ့စပ်ညှိနှိုင်းသူ၏အခန်းကဏ္rကိုအကျိုးသက်ရောက်စေပါလိမ့်မည်။.
ဖေဖေါ်ဝါရီလ 6, 2020 ဖေဖေါ်ဝါရီလ 6, 2020 ဂျော့ခ်ျ Mtimba	မှတ်ချက် Leave
အစ္စရေး ၀ န်ကြီးချုပ်၏ရုံးခန်းမှလျှို့ဝှက်အချက်အလက်များကိုဆက်လက်ထုတ်လွှင့်သည်။ ဆူဒန်အချုပ်အခြာအာဏာကောင်စီ၏အကြီးအကဲ Abdel Fattah al-Burhan နှင့်တွေ့ဆုံမှုတွင်ဖြစ်ပျက်ခဲ့ရာများအကြောင်း Benjamin Netanyahuယူဂန္ဓာတွင်အင်္ဂါနေ့ကဖြစ်သည်။ ကျွမ်းကျင်သူတွေရဲ့ထင်မြင်ချက်ကိုကိုးကားပြီးအစ္စရေးမီဒီယာကဒီမီဒီယာစည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဟာမတ်လ ၂ ရက်နေ့မှာကျင်းပမယ့်အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမှာမဲအနိုင်ရဖို့ဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ ဒါကတစ်လတောင်မပြည့်သေးပါဘူး။
ဇန်နဝါရီလ 24, 2020 ဇန်နဝါရီလ 24, 2020 ဂျော့ခ်ျ Mtimba	မှတ်ချက် Leave
အဆိုပါ ဆူဒန်အစိုးရနှင့်အဓိကသူပုန်လှုပ်ရှားမှုသည်ပဏာမသဘောတူညီချက်ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည် သောကြာနေ့တွင်နှစ်နိုင်ငံအကြားဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောဆွေးနွေးပွဲများမှတစ်ဆင့်နိုင်ငံရေးနှင့်လုံခြုံရေးအစီအမံများနှင့်ပြည့်စုံသောပြန်လည်ရင်ကြားစေ့ရေးသဘောတူညီချက်ရရှိရန်လမ်းခင်းပေးသည်။ ဆူဒန်အစိုးရသည်သူပုန်လှုပ်ရှားမှုများနှင့်ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲများပြန်လည်စတင်ခဲ့သည် ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောပconflictိပက္ခများကိုအဆုံးသတ်ရန်ပြီးခဲ့သည့်အောက်တိုဘာလကဖြစ်သည်။
ဆူဒန်လေယာဉ်ပျက်ကျမှုကြောင့်လူ ၁၈ ဦး သေဆုံးခဲ့သည်
ဇန်နဝါရီလ 3, 2020 ဇန်နဝါရီလ 4, 2020 Juliet Norah	မှတ်ချက် Leave
အနောက်ဘက်တွင်ဆူဒန်စစ်လေယာဉ်တစ်စင်းပျက်ကျ ဒါဖော ဒေသ, လူ ၁၈ ယောက်သေဆုံးပြီး၊ကလေး ၄ ယောက်အပါအ ၀ င်ဖြစ်သည်။ ၏တစ် ဦး ကဆူဒန်န်ထမ်း ကမ္ဘာ့စားနပ်ရိက္ခာအစီအစဉ် (WFP) နှင့်သူ၏မိသားစုသည်သေဆုံးမှုတွင်ပါဝင်ခဲ့သည်။ မကြာသေးမီကသေစေနိုင်သောလူမျိုးစုပclိပက္ခများဖြစ်ပွားခဲ့သောဒေသတွင်လေယာဉ်ပျက်ကျစဉ်သေဆုံးသူများထဲတွင်အရာရှိများစွာပါဝင်သည်။
ဆူဒန်တရားရုံးကဆန္ဒပြသူတွေကိုသတ်ဖြတ်မှုအတွက်ထောက်လှမ်းရေးအရာရှိ ၂၉ ယောက်ကိုသေဒဏ်ချမှတ်လိုက်ပါတယ်
ဒီဇင်ဘာလတွင် 30, 2019 ဇန်နဝါရီလ 4, 2020 Juliet Norah	မှတ်ချက် Leave
အမျိုးသားထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့ ၀ င် ၂၉ ဦး သည်တရားရုံးမှသေဒဏ်ချမှတ်ခြင်းခံခဲ့ရသည် ဆူဒန်, သူတို့ကိုဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားစဉ်တွင်ဆရာအားသတ်မှုဖြင့်အပြစ်ရှိကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ခြင်း တရားခံများကိုထောက်လှမ်းရေးဌာနတစ်ခုတွင် Ahmed al-Kheir အားအလွဲသုံးစားပြုမှုဖြင့်အပြစ်ရှိကြောင်းတွေ့ရှိရပြီးကြိုးဆွဲချခံရတရားသူကြီး Sadok Abdelrahman က
ဆူဒန်သမ္မတဟောင်း Bashir ကိုနှစ်နှစ်ချုပ်နှောင်ထားခဲ့သည်
ဒီဇင်ဘာလတွင် 14, 2019 ဇန်နဝါရီလ 4, 2020 Juliet Norah	မှတ်ချက် Leave
ဆူဒန်သမ္မတဟောင်း အိုမာအယ်လ်ဘာရှား အဂတိလိုက်စားမှုနှင့်ဘဏ္irregာရေးဆိုင်ရာမမှန်မကန်မှုစွပ်စွဲချက်များနှင့် ပတ်သက်၍ အစိုးရ၏ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးဌာနတစ်ခုတွင်ထောင်ဒဏ် ၂ နှစ်ချမှတ်ခံခဲ့ရသည်။ “ ပြစ်မှုကျူးလွန်သူ Omar al-Bashir ကိုနှစ်နှစ်တာကာလအတွင်းလူမှုရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုဌာနသို့ပို့ဆောင်ခဲ့သည်။ ။ သိမ်းဆည်းရမိသောနိုင်ငံခြားငွေနှင့်အမျိုးသားငွေကြေးပမာဏကိုသိမ်းဆည်းရမိသည်” ဟုဥက္ကpres္ဌ Al-Sadiq Abdelrahman ကပြောကြားသည်။
အယ်ဒီတာရဲ့ Pick ဒီဇင်ဘာလတွင် 14, 2019 ဒီဇင်ဘာလတွင် 14, 2019 ဗင်းဆင့်ဖာဒီနန်	မှတ်ချက် Leave
ဆူဒန်နိုင်ငံရှိတရားရုံးတစ်ခုကနိုင်ငံ၏သမ္မတဟောင်းအိုမာအယ်လ်ဘာရှားကို (၇၅) နှစ်အားထောင်ဒဏ်ချမှတ်လိုက်သည် ထောင်ဒဏ်နှစ်နှစ် ပိုက်ဆံခဝါချခြင်းနှင့်အကျင့်ပျက်ခြစားမှုများအတွက်။ ၎င်းသည်ယခင်ဆူဒန်သမ္မတအားတရားစွဲဆိုမှုများအကြားတွင်ပထမဆုံးသောခံယူချက်ဖြစ်သည်။ အသက်အရွယ်ကြီးရင့်မှုကြောင့်သူသည်သေဒဏ်အပြစ်ပေးခြင်းမခံရသည့်ပြစ်မှုကျူးလွန်ကြောင်းပြစ်မှုထင်ရှားစီရင်ခံထားရသောသက်ကြီးရွယ်အိုများအားပြန်လည်ထူထောင်ရေးဌာနတွင်ထောင်ဒဏ်အပြစ်ပေးမည် “ ဥပဒေအရအသက် ၇၀ ပြည့်သူတွေကိုထောင်ဒဏ်အပြစ်ပေးမှာမဟုတ်ဘူး။
ဆူဒန်စက်ရုံမီးလောင်မှုကြောင့် 23 သေဆုံးပြီး 130 ဒဏ်ရာရ
ဒီဇင်ဘာလတွင် 4, 2019 ဇန်နဝါရီလ 4, 2020 Juliet Norah	မှတ်ချက် Leave
ဆူဒန်နိုင်ငံ၏မြို့တော်ကြွေထည်မြေထည်စက်ရုံတစ်ခုတွင်ဓာတ်ငွေ့ရေနံတင်သင်္ဘောပေါက်ကွဲပြီးအနည်းဆုံး 23 လူများသေဆုံးခဲ့သည်။ Khartoum။ လူ ၁၀၀ ကျော်ဒဏ်ရာရခဲ့ပြီးဒေသခံဆေးရုံများတွင်ကုသမှုခံယူရပြီးအများစုမှာမီးလောင်ဒဏ်ရာများရရှိခဲ့သည်။ အဖြစ်အပျက်ကိုအတည်ပြုရာတွင်မြောက်ပိုင်း Khartoum မှဘာရီခရိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးဗိုလ်မှူးချုပ် Hassan Abdullahi ကဒဏ်ရာရရှိသူ ၆ ဦး သည်အခြေအနေအလွန်ဆိုးရွားနေသည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်သေဆုံးသူ ဦး ရေတိုးလာနိုင်သည်ဟုစိုးရိမ်နေကြသည်။
ဆူဒန်နိုင်ငံ Hamdouk သည် Chad သို့တောင်ဆူဒန်ဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်မည်
နိုဝင်ဘာလ 14, 2019 နိုဝင်ဘာလ 14, 2019 ဂျော့ခ်ျ Mtimba	မှတ်ချက် Leave
ဆူဒန်ဝန်ကြီးချုပ် Abdalla Hamdok ရှေ့ပြေး ၂၅ ရက်၊ နို ၀ င်ဘာ ၂၅ ရက်တွင်ရှေ့နေအီဒရီဒီဘူ၏အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲတွင်ဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်ရန်ဖြစ်သည်။ သူကဆက်ပြောသည်မှာ ၂၅ ရက်တွင်တောင်ဆူဒန်နိုင်ငံရှိတောင်ဆူဒန်နိုင်ငံ၏ ၂၅ ခုမြောက်နှစ်တွင်တောင်မှဆူဒန်နိုင်ငံ၌ငြိမ်းချမ်းရေးရရှိစေရန်အတွက်ဟဒ်ဒူသည် ၂-၅ ရက်တွင်အနိုင်ရလိမ့်မည်ဖြစ်သည်။ သန္တာကျောက်စာကိုပြန်လည်ကြည့်ရှု့လေ့လာနိုင်သည် Sudan'ѕсоnflісt.
ငွေလိုအပ်နေသောဆူဒန်ဘတ်ဂျက်သည်ကျန်းမာရေးနှင့်ပညာရေးကို ဦး စားပေးသည်
အဆိုပါSudanеаеCаbіnеtіѕmуvіng၏ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုအပေါ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးအပေါ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးအပေါ်အာရုံစူးစိုက်မှုနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဘတ်ဂျက်ဘတ်ဂျက်ဘတ်ဂျက်၏fosuѕအပေါ် еduсаtіоn နှင့်hеаlthѕесtоrѕ။ အရင်းအမြစ်များကစစ်မှန်သောငြိမ်းချမ်းရေးအကျိုးကျေးဇူးကိုနိုင်ငံ၏ငြိမ်းချမ်းရေး၊ အသုံးစရိတ်များနှင့်ပတ်သက်သောငြိမ်းချမ်းရေးကိုရယူရန်ကြိုးပမ်းသည်ဟုဆိုကြသည်။ ဆူဒန်၏ороkеѕmаngоvеrnmеnt Faisal Saleh, Xnumx ၏budgеtthеbudgеt၏budrеtеthntrrеrtаtеmеntѕіnrrеmtаtеmеntn, hаіd, Mаnіѕtеrѕကောင်စီthаtအထွေထွေလမ်းညွှန်ချက်များ, оеthееduсаtіоnаеhеаlthѕесtоrѕ.
GERD: Trump, Mnuchin, နိုင်းလ်တိုင်းပြည်များအနေဖြင့်၎င်းတို့၏ဆည်ရန်ငြိုးကိုဖြေရှင်းရန်ကူညီသည်
နိုဝင်ဘာလ 7, 2019 နိုဝင်ဘာလ 7, 2019 Joyce Davis က	မှတ်ချက် Leave
အီသီယိုးပီးယား၊ အီဂျစ်နှင့်ဆူဒန်တို့တွင်လည်းရှိသည် ရေကာတာဆည်နှင့် ပတ်သက်၍ သူတို့၏အငြင်းပွားမှုများကိုဖြေရှင်းရန်အလုပ်လုပ်ရန်သဘောတူခဲ့သည် bуmіd-jаnuаrу။ ဆွေးနွေးပွဲများတွင် ၀ ါရှင်တန်မှအပြန်အလှန်ဆွေးနွေးမှုများတွင်သုံးနိုင်ငံနိုင်ငံများ၏နိုင်ငံခြားရေး ၀ န်ကြီးများသည်နည်းပညာဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းပေးရန်ရေကာတာတည်ဆောက်ရေးနှင့်နှစ် ဦး နှစ်ဖက်အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေမည့်သဘောတူညီချက်ကိုဖော်ဆောင်ရန်ရည်ရွယ်သည်။
အောက်တိုဘာလ 20, 2019 အောက်တိုဘာလ 20, 2019 ဂျော့ခ်ျ Mtimba	မှတ်ချက် Leave
တောင်ဆူဒန်နိုင်ငံသားမာဂရက်တွင်ကလေး ၄ ယောက်ရှိသည်။ စျေးကွက်မြင့်မားခြင်းကသူမကလေးများကိုထောက်ပံ့ရန်ခက်ခဲစေသည်ဟုသူမကဆိုသည်။ “ ဘဝခက်ခဲတယ်။ စစ်ပွဲစကတည်းကလေးနှစ်တာကာလမှာငါ့ကလေးတွေကျောင်းမတက်ခဲ့ဘူး။ ကိုယ့်ကလေးတွေကိုထောက်ပံ့ဖို့ရုန်းကန်ခဲ့ရတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့အတွက်ကျောင်းကြေးမပေးနိုင်ခဲ့ဘူး။ ငါအစားအစာတွေပေးနိုင်တယ်၊ ငါအလုံအလောက်ရရင်သူတို့ကျောင်းသွားနိုင်တယ်” ဟုသူမကဆိုသည်။
ဆူဒန် ၀ န်ကြီးချုပ်သည်အစိုးရအဖွဲ့အသစ်ကိုကြေငြာခဲ့သည်
စက်တင်ဘာလ 6, 2019 စက်တင်ဘာလ 6, 2019 ဂျော့ခ်ျ Mtimba	မှတ်ချက် Leave
ကြာသပတေးနေ့တွင်ဆူဒန်ဝန်ကြီးချုပ် Abdullah Hamdouk ပထမ ဦး ဆုံးအစိုးရဖွဲ့စည်းခြင်းကိုကြေငြာခဲ့သည် Presidentပြီလတွင်သမ္မတဟောင်းအိုမာအယ်လ်ဘာရှားကိုဖြုတ်ချပြီးကတည်းက အစိုးရသစ်သည်စစ်အစိုးရနှင့်အရပ်ဖက်အတိုက်အခံများအကြားအာဏာခွဲဝေမှုသုံးနှစ်စာချုပ်အောက်တွင်ရှိသည်။
သြဂုတ်လ 19, 2019 သြဂုတ်လ 19, 2019 ဂျော့ခ်ျ Mtimba	မှတ်ချက် Leave
နှစ်ပေါင်း ၃၀ နီးပါးအာဏာရခဲ့သောဆူဒန်သမ္မတဟောင်းအိုမာဟာဆန်အယ်လ်ဘာရှားသည်မြို့တော်ခတ်တူမ်တွင်တရားရုံးသို့ရောက်ခဲ့သည်။ အကျင့်ပျက်ခြစားမှုများနှင့်သတ်ဖြတ်မှုစွဲချက်အပေါ်။ ဆူဒန်အစိုးရရှေ့နေတစ် ဦး ကဇွန်လတွင်မစ္စတာဘာရှား၏အိမ်၌သဲအိတ်များ၌နိုင်ငံခြားငွေဒေါ်လာသန်းပေါင်းများစွာတွေ့ရှိရကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။ သူသည်အခြားစွဲချက်များနှင့်ရင်ဆိုင်နေရသည်။ မစ္စတာဘာရှား၏ရှေ့နေများကသူအားစွဲချက်တင်ခြင်းကိုအခြေအမြစ်မရှိဟုပယ်ချခဲ့သည်။
ဆူဒန် - စစ်တပ်နှင့်အရပ်သားခေါင်းဆောင်များသည်သမိုင်းကြောင်းပါဝါခွဲဝေရေးသဘောတူညီချက်ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်
သြဂုတ်လ 17, 2019 သြဂုတ်လ 17, 2019 ဗင်းဆင့်ဖာဒီနန်	မှတ်ချက် Leave
ဆူဒန်နိုင်ငံ၏အသွင်ကူးပြောင်းရေးဆိုင်ရာစစ်ဘက်ကောင်စီ၏ခေါင်းဆောင်များနှင့်သူတို့၏အရပ်ဘက်အတိုက်အခံများသည်ယနေ့တွင်တရားဝင်ရှိသည် သမိုင်းဝင်သဘောတူညီချက်တစ်ခုကိုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည် လွန်ခဲ့သောရှစ်လကရေနံကြွယ်ဝသောအာဖရိကနိုင်ငံကိုလှုပ်ခါစေခဲ့သောအဓိကနိုင်ငံရေးအကျပ်အတည်းအတွက်နောက်ဆုံးဖြစ်နိုင်ချေရှိသောအဖြေတစ်ခုအဖြစ်ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ရှုမြင်ကြသည်။
Power Sharing Document လက်မှတ်ထိုးပြီးနောက်ဆူဒန်လူထုအုံကြွမှုပြီးဆုံးခဲ့သည်
သြဂုတ်လ 17, 2019 သြဂုတ်လ 17, 2019 ဂျော့ခ်ျ Mtimba	မှတ်ချက် Leave
ဆူဒန်၏အသွင်ကူးပြောင်းရေးဆိုင်ရာစစ်ကောင်စီနှင့်အတိုက်အခံကိုယ်စားလှယ်များရှိသည် အာဏာခွဲဝေမှုသဘောတူညီချက်ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်အရပ်သားနှင့်စစ်ရေးအသွင်ကူးပြောင်းမှုဆိုင်ရာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီကိုဖွဲ့စည်းပေးပြီး၊ အရပ်သားအစိုးရရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်းအတွက်လမ်းဖွင့်ပေးသည်။
ဇူလိုင်လ 29, 2019 သြဂုတ်လ 10, 2019 ဂျော့ခ်ျ Mtimba	မှတ်ချက် Leave
ဆူဒန်စစ်အစိုးရအပေါ်အပြစ်ပုံမချရ။ ၎င်းသည်လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့များအနေဖြင့်ဇွန်လ ၃ ရက်နေ့တွင်ဖြစ်ပျက်ခဲ့ရာများကိုစစ်တပ်မှစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မတီ၏အစီရင်ခံစာ၏အဓိကအချက်ဖြစ်သည် စစ်တပ်ဌာနချုပ်၌ဒီမိုကရေစီလိုလားသူတစ် ဦး ၏တိုက်ခိုက်မှုကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့သည် ဇွန်လ 3rd အပေါ် Khartoum ၌တည်၏။
ဆူဒန်ပCိပက္ခ - အာဏာသိမ်းမှုကြိုးပမ်းခြင်း
ဇူလိုင်လ 12, 2019 သြဂုတ်လ 10, 2019 Doris Mkwaya	မှတ်ချက် Leave
ဆူဒန်အစိုးရ၏အသွင်ကူးပြောင်းရေးကာလစစ်တပ်သည်အတိုက်အခံကိုယ်စားလှယ်များနှင့်“ သဘောတူညီမှုကိုပိတ်ဆို့ရန်” ရည်ရွယ်သည့်အာဏာသိမ်းမှုကြိုးပမ်းမှုကိုပျက်ပြားစေခဲ့သည်။ လုံခြုံရေးကော်မတီကောင်စီအကြီးအကဲ Jamal Omar Ibrahim ကအရာရှိများနှင့်စစ်သားများစွာအားဖမ်းဆီးထားပြီဟုပြောကြားခဲ့သည်။
၏ကြေငြာချက် အာဏာသိမ်းမှု စစ်တပ်ကောင်စီနှင့်အတိုက်အခံကိုယ်စားလှယ်များ၏သဘောတူညီချက်အရတိုင်းပြည်အတွင်းရှိနိုင်ငံရေးအကျပ်အတည်းကိုအဆုံးသတ်ရန်ပျက်ကွက်ခဲ့သည်။ အီဘရာဟင်ကပြောကြားရာတွင် 12 အရာရှိများမှာဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပြီး (၇) ဦး မှာထောင်ဒဏ် (၅) နှစ်၊
ဇူလိုင်လ 6, 2019 သြဂုတ်လ 10, 2019 ရောဘတ်မာတင် (CN ဝန်ထမ်း)	မှတ်ချက် Leave
ဆူဒန်စစ်တပ်နှင့်အရပ်ဖက်အတိုက်အခံများအကြားအာဏာခွဲဝေမှုဆိုင်ရာသဘောတူညီချက်ကိုသောကြာနေ့ကရရှိခဲ့ပြီးနှစ်နိုင်ငံအကြားလပေါင်းများစွာဆန္ဒပြမှုများအဆုံးသတ်ခဲ့ပြီးနှစ်ပေါင်း ၃၀ နီးပါးအတွင်းအကောင်းဆုံးသတင်းများဖြစ်ခဲ့သည်။ ရွေးကောက်ပွဲကိုသုံးနှစ်နှင့်သုံးလအတွင်းကျင်းပနိုင်သည့်အထိနိုင်ငံကိုပူးတွဲအချုပ်အခြာအာဏာကောင်စီကထိန်းချုပ်လိမ့်မည်။ ပဏာမသဘောတူညီချက်တွင်ဆန္ဒပြသူ ၁၀၀ အသတ်ခံရသည့်ဇွန်လ ၃ ရက်အစုလိုက်အပြုံလိုက်သတ်ဖြတ်မှုအပေါ်လွတ်လပ်သောစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုပြုလုပ်ရန်ကတိလည်းပါဝင်သည်။ အတိုက်အခံနှင့်၎င်း၏ထောက်ခံသူများသည်ရွှင်လန်းမှုရှိသော်လည်းသတိကြီးစွာထားကြသည်။